Baarlamaanka DG Puntland oo ku kala qaybsamay wax ka badalka xeer-hoosaadkooda! | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Baarlamaanka DG Puntland oo ku kala qaybsamay wax ka badalka xeer-hoosaadkooda!
Baarlamaanka DG Puntland oo ku kala qaybsamay wax ka badalka xeer-hoosaadkooda!
Ansixinta wax ka badalka Xeer-Hoosaadka Baarlamaanka DG Puntland ayaa sabab u noqday in Xildhibaannadu ku kala qaybsamaan go’aan sida uu BBC-da u sheegay Xildhibaan Axmed Cabdiraxmaan Jaamac (Axmed Kuluc) oo xubin ka ah Golaha Wakiilada.
Xildhibaanka ayaa tilmaamay in sharciga oo keliya lagu kala dambeeyo balse haddii la baalmaro uu imaanayo isla xisaabsan ku saleysan dastuurka, isaga oo shaki geliyay habka loo maray soo jeedinta mooshinka loo cuksaday wax ka badalka Xeer-hoosaadka Baarlamaanka.
“Waxa aan isku heyno waa sharciyad, Xeer hoosaadka la badalay waa mid hab qaldan loo maray, Guddiga mooshinka keenay ma saxiixin, lama soo marin Guddiga wax ka badalka sameeyay, lagama doodin oo si sharci darro ah ayaa lagu meelmariyay” sidaasi waxaa ku dooday Xildhibaan Axmed Kuluc.
Qodobada wax ka badalka lagu sameeyay ee uu soo bandhigay waxaa kamid ah: In Haddii Guddoonka Baarlamaanka uu waqtiga ka dhamaado sida ku qoran xeerka in maamuus gaar ah wax ku qaato, balse waxaa loo badalay in 66-da Xildhibaan maamuus loo yihiin.
“Haddii Xildhibaan weliba oo Puntland soo mara uu helayo xuquuq maamuus halkee ayaa looga keenayaa dhaqaalaha ku baxaya, Xeerkii hore waxa uu hab maamuus siinayay Guddoonka oo keliya balse haddii Xildhibaannada oo dhan laga dhigo dabcan dhaqaale looma helayo” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Cabdiraxmaan.
Fadhigii 10-aad ee Kalfdhiga 48-aad ee Golaha Wakiilada DG Puntland ee 4-tii July 2021 waxa ay Xildhibaannadu u codeeyeen in wax ka badal lagu sameeyo xeer hoosaadka uu ku shaqeeyo Baarlamaanka.
Mooshinka Xilka looga qaadi karo Guddoonka Baarlamaanka DG Puntland waxaa lala simay Madaxweynaha, waxaana u codeeyay 38-Xildhibaan, 10-mudane ayaa diiday halka ay ka aamuseen 4-kale.
Previous articleJubbaland oo digniin ka soo saartay la macaamilka Al-Shabaab
Next articleTaageerayaasha England Oo Dalbanaya In Lagu Celiyo Final-kii Euro 2020, Sabab. – banaadirsom